» २०७६ फागुन २५ गतेदेखि चैत १ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
२०७६ फागुन २५ गतेदेखि चैत १ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार १०:५३
मेष : साताको निकै राम्रो छ । नयाँ ठाउँको भ्रमण होला । आफन्त सङ्ग भेटघाट होला । ब्यापारमा फाइदा होला । दिदिबहिनीसङ्गको सान्यिध्यता बढ्ने छ । दाम्पत्य जीवन सुखद रहला । स्वास्थ्य समस्यामा भने सजग रहनु होला ।
वृष : राम्रो समय छ । मनमा सन्तोष छाउने छ। विद्यामा प्रगति होला मान प्रतिष्ठा बढ्ने छ । यात्रा सफल रहने छ । मान्यजनको आशिर्वाद मिल्ने छ । कला र साहित्य तर्फ रूचि बढ्ने छ ।
मिथुन : यो साता मध्यम छ । प्रारम्भमा केहि चुनौती सामाना गर्नु पर्ने छ । अनावश्यक यात्रा होला । कार्यमा केहि बिलम्भ होला । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । साताको मध्य बाट निकै राम्रो समय छ । आत्म सन्तुष्टि बढ्ने छ । पारिवारिक खुसी मिल्ने छ ।धार्मिक कार्यमा रुची बढ्ने छ । मान सम्मान बढ्ने छ ।
कर्कट: राम्रो समय छ । शुभकार्यमा मन लाग्ने छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट यो साता फाइदामा जाने छ । नयाँ ज्ञान हासिल गर्ने योग छ । यात्रा सफल होला । मातापिताको आशिर्वाद मिल्ने छ । आफन्त सङ्ग भेटघाट होला ।
सिंह: उत्तम समय छ । मिष्टान्न भोजन प्राप्त होला । सभा सम्मेलनमा सरिक भैयोला। परोपकारिक कार्यमा रुची बढ्ने छ । रोकिएको कार्य सम्पादन होला । मन खुसी रहने छ । वाक्चतुर्याइ बढ्ने छ ।
कन्या : शैक्षिक क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रगति होला । आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्ने छ। काम गर्ने जोश जागर बढ्ने छ । यात्रा सहयात्रा सफल होला ।धार्मिक कार्यमा रुची बढ्ने छ । मान सम्मान बढ्ने छ ।
तुला: वैदेशिक यात्राको सम्भावना छ । पतिपत्नीको सम्बन्धमा समधुरता आउन सक्छ । व्यापार व्यावसायमा फाइदा होला । बोलिको प्रभाव बढ्ने छ । खानपिनमा रुचि बढ्ने छ ।
वृश्चिक : समान्य समय छ । स्वास्थमा समस्य आउन सक्छ । खर्च बढ्न सक्छ । यद्यपि साताको मध्य बाट राम्रो समय आउने छ । मन प्रसन्न रहला मिष्टान्न भोजन मिल्ने छ । धार्मिक कार्यमा रुची बढ्ने छ । मान सम्मान बढ्ने छ ।
धनु: राम्रो समय छ । मनमा सन्तोष छाउने छ । विद्यामा प्रगति होला । मान प्रतिष्ठा बढ्ने छ । यात्रा सफल रहने छ । मान्यजनको आशिर्वाद मिल्ने छ । नयाँ मित्र बन्ने छन् । घरमा शुभ कार्य सम्पन्न होला ।
मकर : उत्तम समय छ । भूमि र ब्यापारबाट फाइदा होला ।
नयाँ बिषयबस्तुको जानकारी होला । कार्यमा बिलम्भ होला । आपसी मनमुटाव बढ्ने छ । विद्या, बुद्धि र स्मरण शक्ति बढ्ने छ।
कुम्भ : भाग्योदयको समय छ । धार्मिक कार्यमा रुची बढ्ने छ । मान सम्मान बढ्ने छ । रोकिएको धन प्राप्त होला । आट, उत्साह बढ्ने छ । धन, मान र कृति बढ्ने छ । परिक्षा सफल हुने छ ।
मीन : भाग्योदयको समय छ । दिदिबहिनी दाजुभाइको सम्बन्ध मजबुत हुनेछ । पारिवारिक भेटघाट होला । यात्रा सफल रहला । मनमा शान्ति छाउने छ । रोकिएको धन हाता पर्ने छ ।
प्रस्तुतकर्ता :ज्यो.चक्रपाणी डुम्रे (शास्त्री)
ति.न. पा. १ नयाँमिलचोक रूपन्देही
सम्पर्क न : ९८५७०३५४६१
थप तीनमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण
शुद्धोधन ४ मा बिपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण
राहत आफुखुसी नबाड्न सिनपाको आग्रह